musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Canary Island yeLa Palma ikozvino nzvimbo yedambudziko
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kuziviswa kwenzvimbo yenjodzi kwaizobvumidza hurumende yeSpain kuti iite mamirioni emauros mumari yehurumende kuwanikwa kuti itsigire matanho ekukurumidzira kuLa Palma, uye vagari vepazvitsuwa zvakakanganiswa nebasa rekuputika kwemakomo rinoenderera mberi nekuparadza chitsuwa ichi.
Sipanishi Canary Islads 'La Palma chitsuwa chakamirira inogona kunge ine chepfu gore kubva kumakomo anoputika.
Hurumende yeSpain inovimbisa mamirioni mukutsigira sezvo chiitiko chakasimba chegomo rinopfuurira kuparadza La Palma.
Iye zvino, mamirioni mune zviwanikwa zvehurumende anogona kusunungurwa kutsigira matanho ekukurumidzira paLa Palma, uye neavo akakanganiswa nekuputika.
Hurumende yeSpain yakazivisa nhasi, ichizivisa zviri pamutemo iyo Canary IslandsLa Palma, iyo inogara kure nemhenderekedzo yeNorth Africa, 'nzvimbo yedambudziko'.
Kuzivisa kwenzvimbo yenjodzi kwaizobvumira iyo Hurumende yeSpain kuita kuti mamirioni ema euro muhurumende mari iwanikwe yekutsigira matanho ekukurumidzira paLa Palma, uye vagari vepachitsuwa vakanganiswa nebasa rakakura remakomo rinoenderera mberi nekuparadza chiwi.
Maererano ne Hurumende yeSpain mutauriri, hurumende yainge yagovera chikamu chekutanga che € 10.5 mamirioni ($ 12.30 mamirioni) mukubatsira mari kuna La Palma.
Pasuru iyi inosanganisira € 5 miriyoni yekutenga dzimba, nepo imwe yasara mari yacho yaizotengwa kutenga fenicha uye zvinhu zvakakosha zvemumba mushure mezviuru zvaifanira kutamiswa.
Lava inoenderera ichiyerera ichibva kuCumbre Vieja volcano iyo mafississ yakatanga kuvhurwa munaGunyana 19 mushure memakumi emakore yekusaita basa, ichiparadza dzimba dzinosvika mazana matanhatu pamwe nemachechi neminda yemabhanana pa Canary Island inozivikanwa nevashanyi.